Igumbi lokulala eli-2 elithandekayo elisemaphandleni
Hillpool Top, England, United Kingdom
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguBianka & Jan
I-Hilltop Cottage- Libala amaxhala akho kule ndawo iphangaleleyo nepholileyo. Iimayile zeendlela zeenyawo ezintle zoluntu ukuze uphonononge phakathi kwelizwe elimangalisayo. Uhamba ecaleni komlambo obhibhayo kunye nomhlaba omhle wasefama. Simalunga nekhilomitha enye ukusuka kwilali yaseChaddesley Corbett kunye ne-Swan pub edumileyo enoluhlu lwee-ales zokwenyani, iimayile ezili-13 ukusuka kumbindi wedolophu yaseBirmingham, kunye neekhilomitha ezi-5 ukusuka eWest Midlands Safari Park. I-cottage ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye inikwe zonke iimod-cons. Yiza nje uzothula!
I-Hilltop Cottage Lodge yindawo yokulala emibini yokuhlambela enye, enemigangatho ephezulu. Uya kusetyenziselwa kuphela indawo yokulala, indawo yokuhombisa kunye nendawo yokupaka yabucala. Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuphumla. Kukho i-Wifi kuyo yonke ipropathi.
Sikumgama wokuhamba welali entle emnyama namhlophe yaseChaddesley Corbett kunye ne-Swan pub edumileyo; Iimayile ezintlanu ukusuka eWest Midlands safari park; Iikhilomitha ezili-12 ukusuka kwiMyuziyam yeLizwe eliMnyama kunye neekhilomitha ezili-13 ukusuka kumbindi wedolophu yaseBirmingham. Indawo yokuhlala yaseHill Pool ibekwe phakathi kweHagley, Belbroughton kunye neHarvington. Kukho iimayile zeendlela zeenyawo zoluntu ukuze ujonge emaphandleni amahle.
Umbuki zindwendwe ngu- Bianka & Jan
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hillpool Top